musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Canada New Vaccine Zvinodiwa
Hurumende yeCanada yakazvipira kuchengetedza chikamu chedu chezvekufambisa, kusanganisira vashandi nevafambi vakachengeteka uye vakachengeteka. Vaccinations ndiyo yakanakisa mutsara wekudzivirira kurwisa COVID-19 uye akasiyana ayo. Ndosaka vashandi nevafambi vari mumatunhu akadzorwa nemhepo uye njanji vachizoda kubaiwa nhomba yeCOVID-19.
Zvinodiwa kutanga Gumiguru 30
Sezvo Hurumende yeCanada yakazivisa muna Nyamavhuvhu 13, vafambi munzvimbo dzakadzorwa nemhepo nezvitima vachada kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Mushure mekubvunzana kukuru, Transport Canada yakapa mirairo yekupedzisira uye nhungamiro kune vendege nenjanji kuti vashandise zvinodiwa zvejekiseni kune vafambi izvo zvinoshanda na3 AM (EDT) Gumiguru 30, 2021. Zvinodiwa zvejekiseni zvichashanda kune vese vafambi vane makore gumi nemaviri ekuberekwa pamwe chete. mwedzi mina vari:
• Vafambi vendege vari kubhururuka nendege dzemunyika, dzemumuganhu, kana dzekunze kwenyika dzinobva kune dzimwe nhandare dzendege muCanada; uye
• Vafambisi vezvitima paVIA Rail uye Rocky Mountaineer zvitima.
Vafambi vachada kuratidza ndege nenjanji humbowo hwekudzivirira. Kwenguva pfupi yekuchinja kusvika Mbudzi 29, 2021, vafambi vane sarudzo yekuratidza humbowo hweiyo COVID-19 molecular test kuti vakwanise kukwira. Ndege nenjanji zvichave nebasa rekusimbisa mamiriro ekudzivirira kwevafambi. Mumamiriro ekufamba nendege, iyo Canadian Air Transport Security Authority (CATSA) inotsigirawo vashandisi nekusimbisa mamiriro ekudzivirira.
Pachasara mashoma ezve emergency uye pekugara akasarudzika enharaunda dzakatarwa kuti vagari varambe vachiwana masevhisi akakosha.
Zvinodiwa kushanda musi wa30 Mbudzi
Kubva munaNovember 30, yakashata COVID-19 molecular test haichagamuchirwi seimwe nzira yekudzivirira. Kana vafambi vasati vatanga chirongwa chekubaya nhomba, kana kuti vakasatanga nekukasika, havazokodzeri kufamba kutanga musi wa30 Mbudzi. Mamwe mashoko achapiwa mumavhiki anotevera.
Pamusoro pezvo, pachava nenhanho dzekuchinja kune vanhu vekune dzimwe nyika vasina kubayiwa avo vanowanzogara kunze kweCanada uye vakapinda muCanada pamberi paGumiguru 30. Kusvikira Kukadzi 28, vachakwanisa kukwira nendege nechinangwa chekusimuka kuCanada kana vakaratidza humbowo. bvunzo inoshanda yeCOVID-19 molecular panguva yekufamba.
Hurumende yeCanada icharamba ichibatana nevakakosha vane chekuita, vashandirwi, ndege nenjanji, vamiririri vekutaurirana, Marudzi, zviremera zvemunzvimbo, uye mapurovhinzi nematunhu kuti vatsigire kuitwa kwechinodikanwa chekudzivirira.